Fiombonam-pihetseham-po | NewsMada
Par Taratra sur 28/06/2019
Mbola mitana ny sain’ny maro, hatramin’izao, ny voina lehibe namoizana ain’olona 16 sy naharatrana olona ampolony maro, tetsy amin’ny kianjan’i Mahamasina, ny takarivan’ny 26 jona teo. Mitohy hatry ny omaly ny fitsaboana ireo naratra, etsy amin’ny HJRA. Tsy maintsy atrehina koa ny fikarakarana ny razan’ireo namoy ny ainy. Nilaza ny handray an-tanana ny fandaniana rehetra amin’izany ny fitondram-panjakana. Tsapa ary tena hita taratra ny fiombonam-pihetseham-po (alahelo eto ny resaka) noho iny voina tsy nampoizina iny. Sesilany ny firarian-tsoa ho an’ireo naratra, ny fampaherezana sy ny fampiononana ny fianakavian’ireo mana-manjo, avy amin’ireo fikambanana samihafa, avy amin’ny fitondrana, avy amin’ny olon-tsotra. Eny, hatramin’ny avy any ivelany aza… Voin-kava-mahatratra tokoa e!
Nanamarika ny andron’ny omaly koa ny fiombonam-pihetseham-po iray hafa. Fiombonam-pihetseham-po noho ny hafaliana tamin’ny fandresen’ny Barea, nifanandrina tamin’ny Burundi, tany Alexandrie, Egypta. Resa… Can re io e! Tamin’ny isa iray no ho aotra ny nandresen’ny ekipam-pirenena malagasy ny Borondey. Nanakoako hatraiza hatraiza ny “Alefa Barea!”. Laharana faharoa ao anatin’ny vondrona B misy azy ny Barea, manaraka an’i Nizeria efa any amin’ny am-pahavalon-dalana. Fandresena miezinezina amin’izao fandraisana anjara voalohany amin’ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika (Can 2019) amin’ny baolina kitra io. Manamarika ny tantaran’ny baolina kitra malagasy izany. Azo antoka fa tsy hijanona hatreo ny fiombonam-pihetseham-pon’ny Malagasy amin’ireto maherifon’ny firenena ireto amin’ny dingana manaraka.
Araka izany, na amin’ny alahelo na amin’ny fahoriana, zava-dehibe ny fiombonam-pihetseham-pon’ny rehetra. Mampiray ny firenena, eny fa na eo amin’ny tsy fitovian-kevitra aza. Vita ho azy ny fampihavanam-pirenena, ary azo avadika ho fampandrosoana ny firenena tokoa ny fiombonana… Fiombonam-pihetseham-po. Sa ahoana indray?